Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè French hapụrụ Job ka ha gbozigharị ụgwọ ezumike nka - RayHaber
HomeỤWAEurope33 FranceNdị ọrụ ụgbọ oloko French hapụrụ ọrụ n ’imezigharị ụgwọ ezumike nka
Ndị ọrụ ụgbọ oloko French hapụrụ ọrụ n ’imezigharị ụgwọ ezumike nka
25 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 33 France, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General 0
ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè france kwụsịrị mmezi penshion
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Frans ndị megidere ndozigharị gọọmentị chọrọ itinye n'ọrụ na iwu penshion ahapụla ọrụ ha. N'ihi ihe ndị ọrụ mere, ọgba aghara mere na ọrụ ụgbọ oloko ahụ.
Na France, ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè kụrụ aka ịhapụ ịgbazigharị gọọmentị chọrọ iwelata, dị ka ịda mba ụgwọ ezumike nká, na oge iwelata afọ ezumike nká site na 62 ruo 64. Ndị ọrụ kwụsịrị ọrụ ahụ mgbe oku nke General Workers 'Union (CGT) na South Ray Sud Rail Union, nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè so na ya, mere mkpesa na mgbanwe gọọmentị penshion na Paris.
N’ihi ngagharị iwe a, ụfọdụ ụgbọ oloko na ọdụ ụgbọ oloko enweghị ike imezu. Nkwuputa nke iku a ga-eme tupu oge a na iji ngwa ọrụ pụrụ iche maka ụmụ amaala iji kpọchie okporo ụzọ ebute.
Ụgwọ ezumike mmanụ n'ọnụ ọnụ ndị ọrụ TÜDEMSAŞ 03 / 05 / 2013 TÜDEMSAŞ ọrụ ego ezumike nká mmanụ aṅụ dị n'ọnụ Turkey Railway ọnọdụ nke ụgbọ okporo ígwè ọrụ doo nke iwu na liberalization nke iga bịakwara burukwa. Ejiri bọtịnụ ahụ iji belata ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na enyemaka TCDD, nke dị na TÜDEMSAŞ, site na ezumike nká. Dị ka Iwu ahụ si dị, nke e bipụtara na Gazette Official, ndị nwere ikike ịkwụ ụgwọ ezumike nká ma ha ga-anọ na ezumike nká n'ihi afọ ole na ole ka e nyere ụgwọ ezumike nká. Mpaghara 5 nke iwu bụ 5 na-adịru nwa oge. Nkeji edemede na Annex (I) na (II) nke Iwu Iwu 399 nọ na TCDD na ndị enyemaka ya TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ na TÜDEMSAŞ esinde
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè hapụrụ ọrụ, amaghị ndị njem ahụ laghachiri na nche 23 / 05 / 2012 N'okwu mkparịta ụka na-emekọrịta ọnụ, ndị ọrụ obodo sitere na ndị ọrụ ọha na eze na-enweghị ike ikwenye na gọọmenti kwụsịrị. Na Adana, ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè malitere ọrụ ha na 00.00. Ndị agha dị iche iche na-akwadoo Değiş nke ukwuu ma kwadoo ya. Ụmụ amaala ndị na-amaghị maka agha ahụ laghachiri na nlekota ahụ. Ụgbọ njem na-egbu n'ihi ntiwapụ. Mgbe ụgbọ oloko ejiri ịnyịnya ibu ebugharịghị, ndị nwe ya nwere nsogbu. Turkey Kamu-Sen jikọọ na Turkish Transportation-Sen Branch onyeisi oche Cengiz Köse Adana, na dị na oge ndị dị na mkpokọta zụta o kwuru na ọrụ stoppage malitere na 00.00. Köse, bụ onye mesiri mkpebi gọọmenti ike ikere òkè na mkparịta ụka nke ọkara oge, na-eleghara onye uweojii ahụ anya ma na-etipịa ego ahụ, gel
Ndị ọrụ TCDD hapụrụ Job na Rain! Sivas (Photo Gallery) 16 / 04 / 2013 Ndị ọrụ TCDD hapụrụ ọrụ na mmiri ozuzo ndị ọrụ TCDD na Sivas hapụrụ ọrụ n'ụbọchị mmiri ozuzo. Ndị ọrụ TCDD mere mkpọmkpọ akwụkwọ n'ihu Sivas ọdụ ụgbọ okporo ígwè iji mee mkpesa megide Iwu ahụ maka ntọhapụ nke okporo ụzọ ndị ụgbọ okporo ígwè zigara na nnukwu mba mba Turkey. Ind Anyị nọ n'ehihie nke usoro iwu nke ga-ekpebi ọdịnihu na ọdịnihu nke ụgbọ okporo ígwè anyị na akụkọ ihe mere eme kwa afọ. Ụgbọ njem bụ ikike ụgbọ ala nke mmepe na akụ na ụba nke mba a. N'ihi nke a, 156 dabeere na ozi na ọhụụ nke akụkọ ihe mere eme nke akụkọ ihe mere eme, ahụmahụ na nchịkọta nke ihe ọdịbendị
Ndị ọrụ Deutsche Bahn hapụrụ Job 18 / 03 / 2013 Ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè mebiri site na ịpịpụta ọkara awa abụọ gafee mba ahụ dị irè n'ụtụtụ a mgbe nkwekọrịta nkwekọrịta nkwekọrịta dị n'etiti òtù ahia na German okporo ụzọ (Deutsche Bahn) bịara na njedebe na azụmahịa Germany. N'ụtụtụ, ịdọ aka ná ntị ahụ na-aga n'etiti 06.00-.8.00 na-emegharị njem n'ime obodo dum, karịsịa na ógbè East Germany ebe snow na-ada. Ụgbọ njem dị n'etiti ọtụtụ obodo kwụsịrị n'ihi ụda ahụ, mgbe ụfọdụ igbu oge mere na mpaghara ụfọdụ. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na nzụlite ụgbọ okporo ígwè na-esonye na ịdọ aka ná ntị, ha kwesịrị ịga na oge ọzọ ...
TCDD arụ ọrụ oge ezumike nká 11 / 06 / 2014 TCDD ezumike nká nnupụisi nke nwa oge ọrụ: Republic of Turkey State Railways (TCDD) Ebe 1975 140 afọ na-arụ ọrụ dị ka a n'oge a kara aka ọrụ na-arụ ọrụ Moosh bụ nso enweghị ike ịla ezumike nká. Ndị ọrụ, ndị na-echere ka a chụpụrụ ha mgbe afọ 60 gasịrị n'ihi na ha enweghị ike ịla ezumike nká, gwara gọọmenti ka ha nye ndị na-arụ ọrụ n'oge a na-arụ ọrụ na State Railway. TCDD 5 nọchitere Izzet Acikbas, "ọnwa 2009, ọnwa 3, na ọnwa 6, ruo mgbe ọnwa 1975 nọ na-agba ọsọ. Açıkbaş "Ndị na-akwụ ụgwọ n'okpuru iwu mgbe ha lara ezumike nká, XNUMX na-akwụ ụgwọ n'ọrụ na-enweghị ịhapụ ọrụ ahụ
Taa na History: 25 September 1919 gburugburu Vezirhan
Ụgwọ ezumike mmanụ n'ọnụ ọnụ ndị ọrụ TÜDEMSAŞ
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè hapụrụ ọrụ, amaghị ndị njem ahụ laghachiri na nche
Ndị ọrụ TCDD hapụrụ Job na Rain! Sivas (Photo Gallery)
Ndị ọrụ Deutsche Bahn hapụrụ Job
TCDD arụ ọrụ oge ezumike nká
Onye isi ulo oru ulo oru ezumike ulo oru ezumike ego choro iziga ya n'ime ulo oru 90 dollar Dollar High Speed ​​Train Project
BTS, na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè France
Ndị ọrụ Metro na France tinyere aka na nti
Ndị ọrụ okporo ụzọ France na-agbanye mkpebi ikpe
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè bụ naanị otu megide egwu PKK